100 Posts Anniversary Day | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
100 Posts Anniversary Day
Happy 100 Posts Anniversary Day
အခု ကျွန်တော် ဘလော့ ရေးတာ Postsအခု ၁၀၀ မြောက်တဲ့ နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ၁၀၀ မြောက်မှာ ကျွန်တော် ဘာတွေရေးခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်မိတယ်။
ajax, computer science, eclipse IDE, Internet and Me, Programming language, project management, RPG, struts2
ကဗျာ၊ ရောက်တတ်ရာရာ၊ အတွေးအခေါ်၊ အချစ်၊ ဘာသာရေး၊ ကျွန်တော်နှင့်၊ 日本
စတဲ့ အကြောင်းတွေကို ရေးခဲ့ပါတယ်။
* ကဗျာ (37)
* ကျွန်တော်နှင့်.. (11)
* ဘာသာရေး (3)
* အချစ် (9)
* အတွေးအခေါ် (21)
* ရောက်တက်ရာရာ (16)
* computer science (1)
* eclipse IDE (1)
* Internet and Me (2)
* project management (2)
* status (1)
* struts2(1)
* 日本 (6)
ဒီနေ့ အထိကျွန်တော့ ဘလော့ကို လာကြည့်သူပေါင်း
3,566 hits ပဲရှိပါသေးတယ်။
၀င်ကြည့်တဲ့ သူ အများဆုံးနေ့ကတော့
Friday, March 5, 2010 နေ့ကပါ။ အယောက် ၃၀၀ လောက်တစ်နေ့တည်းမှာ ၀င်ကြည့်ကြတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ရေးသားပါဦးမယ် အကြံပေးစရာရှိရင်လည်း အားမနာပဲ ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
This entry was posted on Wednesday, May 5th, 2010 at 12:16 pm	and posted in Anniversary.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
« ကျွန်တော်နှင့် Bridge SE
3 responses to “100 Posts Anniversary Day”
OH I CAME TODAY IS YOUR SPECIAL DAY FOR 100 POSTS OF ANNIVERSARY,,,,,,,,,,OK THAT IS FOR REMEMBERAMCE,,,,,I WISH YOU MANAGE TO WRITE YOUR FEELIING AND EMOTIONALS TILL ENDS OF YOUR DAY OR YOU DECIDE NOT TO WRITE ANYMORE.